युगसम्बाद साप्ताहिक - विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा
Sunday, 04.05.2020, 02:32pm (GMT+5.5) Home Contact
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा
पञ्चायती शासनको तानाशाहीबाट दिक्क भएका जनताले नानीमैयालाई जिताए जस्तै एकपटक हेरिहालौं न त भनेर एमालेलाई बहुमतमा ल्याएका हुन् । कांग्रेसभन्दा यो असल हो भनेर हैन । एमाले–माओवादी गठजोड भएपछि उन्माद बढ्ने नै भयो । फलतः केरा पाएपछि बोक्रैसित खान थाले । फलतः कुनै पनि क्षेत्र आज विसंगतिबाट मुक्त छैन । राजनीतिप्रति नै जनतामा एक प्रकारको विरक्ति आएको छ, राजनीति गर्नेहरुप्रति नै जनतामा अविश्वास बढ्दो छ ।
आफ्नो राष्ट्रको हित आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सहमतिका आधारमा नीति निर्माण गर्ने मानसिकता हराउँदै गएको छ । बहुमतको मातले गर्दा सर्वजन हितको लागि गरिनुपर्ने काम पनि दलीय हितमा मात्र केन्द्रित हुन थालेपछि जनता झस्केका छन् । आज निर्दोषले डराउनुपर्ने र दोषीले छाती फुकाएर हिंड्ने थिति देखापर्दैछ । सत्ताधारीले पनि सत्ता बाहिरकाले जस्तै यस्तो र उस्तो हुनुपर्छ भनेको सुनिन्छ । डाडु–पन्यू आफ्नो हातमा भएकाले त गरेरै देखाउनुपर्ने होइन ? तर यहाँ उल्टो दिशा समातिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् र उनैलाई उद्घाटन गर भने हुनेमा व्यापारीका प्रभावमा राष्ट्रपति नै बाग्लुङ पुगेर स्कूल उद्घाटन गर्नुलाई घरघरमा सिंहदरबार पु¥याएको अर्थसंग मेल खाँदैन । शितल निवास नै घरमा पुग्नुपर्ने हो भने सिंहदरबार किन पठाउनुप¥यो ? राष्ट्रिय सम्पत्तिको मात्र दुरुपयोग भएन ? जेठ १ गते नयाँ पत्रिकामा डा. बाबुराम भट्टराईको लेखमा वर्तमान राष्ट्रपतिका यस्तै नसुहाउँदा गतिविधिका विवरण चित्रित छन् । खोई यस्ता विषयमा सोच विचारकासाथ काम भएको ?
संसदीय व्यवस्था मानेर विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु स्थापित भैसकेर आआफ्नो प्रदेश र गाउँ–नगरको विकास निर्माणका कार्यक्रम तत्तत् सरकारले गर्ने भैसकेपछि पनि केन्द्रका प्रतिनिधिसभाका सांसदको विशेष कार्यक्रम भनेर प्रति सांसद ४ करोडका दरले लिने गरेकामा आव २०७६।०७७ को बजेटमा फेरि पनि रकम बढाएर दिनु–लिनु अर्को लूट मच्चाउन दिनु सुहाउँदो कुरा हो त ? यस्तै हो भने लूटका गीत गाउन अरु सयौं पशुपति शर्माहरु निस्केलान ? कतिलाई प्रतिबन्ध लगाएर सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले ?
सरकारले खर्च गर्न सकेन भन्ने आरोप लगिरहेका बेला त्यो आरोपबाट मुक्त हुन र कार्यकर्तालाई फाइदा पु¥याउन नयाँ जुक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निकालिएको भनिंदैछ । आउँदो असारभित्र खर्च गरिसक्ने गरी सबै स्थानीय तहलाई अनुदानको रुपमा बेरोजगारलाई ३० दिजको रोजगारी वापत दिने ३६ करोड, ७९ लाख ६९ हजार पठाइएको छ । यसबाट १ लाख बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिने नाममा कार्यकर्तालाई खर्च हुने भो भन्ने चर्चा पनि विसंगतिभित्रकै एउटा बान्की हुने भयो ।
यहाँ जनता रल्याउने काम मात्र भैरहेको छ । रेल र पानीजहाज आउने वित्तिकै सबै कुरा भरिभराउ हुन्छ भनेजस्तो रंगीन भाषणले अलमल्याउने खोक्रा प्रयास भरहेका छन् । हो, रेल–पानीजहाज आउनुपर्छ, तर आजको आवश्यकता के हो र प्राथमिकता केले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा वास्ता गरिएको पाइँदैन । यो सबै झोका जनतालाई भाषणको भाङ खुवाएर लठ्याउने चलाखी मात्रै हो । वर्षौंदेखि मिर्मीदेखि सेतीबेनीसम्म कालीगण्डकीमा स्टिमर र बराह क्षेत्र–बेलकाबीच पनि स्टिमर चलेकै छ, कुन नौले भयो र !
सत्तामा भएकाहरु “समृद्ध नेपाल”का नारा सुनाउँछन् । तर यहाँको स्थिति हेर्दा नेता, मन्त्री, सांसद, व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया, कमिशनखोरहरुकै समृद्धि चम्किने काम मात्र भएको छ । जनसामान्य त किनारको किनारमै छन् । समृद्धिका नारा सुन्नु बाहेक केही भएन । दिनरात रेल र पानीजहाजका कुरा सुनाएर तिनले के समृद्धि बोकेर ल्याउँछन् ? कुनै दिन ल्याए भने पनि ठूलाबडाकै निम्ति हुनेछ । जेजे गर्नुछ गरेर आफ्नो इष्टसिद्धि गरे भैगो नि, किन जनताको नाम लिनु ? भन्न थालेका छन् जनताले ।
राजनीतिक चरित्र पनि कस्तो हो कुन्नि ! जसले आफैं भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छ उसैले भष्टाचार गरिरहेको हुन्छ, भ्रष्टाचार बिरोधी भाषण गर्न पनि छोड्दैन । जनताले के पत्याउने– के नपत्याउने हो ? भन्नै नसकिने भएको छ । भाषण पत्याउने कि काम ? कामले काजी हुने चेतना भावी नेतामा आयो भने कुन्नि ! नेताको चरित्रले नै कुनै पनि व्यवस्था राम्रो–नराम्रो हुन्छ भन्ने मान्यतामै शंका हुन थालेको छ । यो भाषणवाजी मात्रै कहिलेसम्म चल्ने हो भनेर जनता अचम्भित भएर हेर्दैछन् ।